MC10 Factory - China MC10 mpanamboatra sy mpamatsy
Antsoy izahay: +86 13167223337
Mpanadihady hoditra portable
M11 Wifi fifandraisana
Meicet 3D Famoronana vatana sy mpandinika posture Bala...
Mpanadihady hoditra matihanina ho an'ny klinika hoditra MC2400
Multifunction Professional Portable Smart Facial Ski...
Mpanamboatra milina mpandinika hoditra matihanina amin'ny...
Fitaovana estetika matihanina Beauti Machine Woo...
Face Tester Detector Machine Fitaovana fikarakarana hoditra hoditra Ag...
10-in-1 Multifunction Beauty Machine Microdermabrasi ...
10 In 1 Beauty Salon Training School Multifunction A...
Masinina famakafakana hoditra amin'ny fitaratra mandroso indrindra Sk...
Toetoetra: Fizarana loharanon-jiro 360°
Tombontsoa:Loharano hazavana LED 8; Fanohanana amin'ny fiteny maro; Famakafakana karazana hoditra 12 lehibe
Mety amin'ny: Salon Beauty, Hopitaly, Foibe fikarakarana hoditra, SPA sns.
Masinina famakafakana hodi-taratra mandroso indrindra Facial Skin Analyzer System Vidin'ny karazana Analyseur De Peau Analizadores Faciales
ISEMECO dia milina famakafakana hoditra avo lenta ho an'ny matihanina. Namboarina sy novolavolain'ny orinasa Shanghai Mayskin izy io tamin'ny taona 2020. Manana karazana hazavana 3 izy io - jiro RGB, UV ary CPL. Mifototra amin'ireo...
Ahoana ny fikarakarana sy fiarovana ny hoditra i...
Rehefa mihamangatsiaka ny andro, dia hiharan’ny tsindry mafy ny hoditra noho ny fihenan’ny maripana tampoka, ka mila tazomina sy arovana ara-potoana. Noho izany, ahoana ny fomba fikarakarana hoditra tsara sy fiarovana? 1. Exfoliati...
Ny Lantern Festival
Ny andro faha-15 amin'ny volana voalohany amin'ny volana dia ny Fetiben'ny Lantera Sinoa satria ny volana voalohany dia antsoina hoe yuan-volana ary tamin'ny andro fahiny dia nantsoina hoe Xiao ny alina. Ny andro faha-15 dia ny f...